အဆိုအမိန့် Archives - BuzzFeed Myanmar
လမ်းကြောင်းနှင့် သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းကျော်လွန်ပြေးဆွဲသော YBS ယာဉ်များကို ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ စောင့်ကြည့်သတိပေးမှု စတင်
လမ်းကြောင်းနှင့်မိုင်နှုန်း သတ်မှတ်ချက် ကျော်လွန်ပြေး ဆွဲသည့် ဘတ်စ်ကားများကို ထိန်း ချုပ်ရေးစင်တာက စောင့်ကြည့် သတိပေးနေပြီဖြစ်ပြီး လိုက်နာ ခြင်းမရှိပါက အရေးယူမည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့်
မြန်မာ ကိုဝေဖန်တဲ့ YANGHEE LEE ကို မြောက်ကိုရီးယား ရှုတ်ချ
မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာယန်ဟီးလီက မကြာသေးခင်ကပဲ ဝေဖန် ပြောဆိုခဲ့တဲ့အပေါ် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြောခွင့်ရ ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ၈-၁၂-၁၉၄၃ ရက်နေ့ အရှေ့အာရှတိုက်စစ်၊ တစ်နှစ်ပြည့်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်တွင် ပြောကြား ခဲ့သည့်မိန့်ခွန်းမှ ကောက်နုတ်ချက်)
** ခေတ်သစ်ဝေဿ န္တရာသူဋ္ဌေးဦးစိုးတင့်**
(18.5.2016)နေ့က ဆိုက်ကားဆရာ ၅၀အတွက်သိန်း
(19.5.2016) နေ့မှာ ထပ်မံပြီး ဆိုက်ကား
ဆရာ ၆၃၀ ကျော်အတွက် တစ်ယောက်တစ်သိန်း
အသက် (၇၂) အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အတ္ထုပွတ္တိအကျဉ်း
အားကျအတုယူစရာ ဦးဂိုအင်ကာ မိခင်ရဲ့ နောက်ဆုံး နေဝင်ချိန်
ဦးဂုိုအင်ကာ က ၄င်း၏ မိခင် သေဆုံးသွားပုံကုို ဥပမာပေးပြီး အောက်ပါအတုိုင်း ပြန်ဖြေပါတယ်။ (ဒီအကြောင်းကုို ၁၉၉၂ ခုနှစ် အေပရယ်လထုတ် ဝိပသနာ သတင်းစဉ်မှာ ထည့်သွင်း ဖေါ်ပြခဲ့တယ်)
ခရစ္စဂါ့ဒ်နာ(chris gardner) သို့မဟုတ် အိမ်ခြေယာမဲ့ဘ၀မှ မီလျံနာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ဖြစ်လာသူ ..!
ရှင်ဥက္ကဌ (သို့မဟုတ်) တော်လှန်သော ရဟန်းတော်
၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာလောကကို အကြီးအကျယ်ရိုက်ခတ်လှုပ်ရှားသွားစေသည့် စာအုပ် တအုပ် ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ ယင်းစာအုပ်ကြောင့် စာအုပ်ရေးသူ၊ ထုတ်ဝေသူနှင့် ပုံနှိပ်သူတို့ မှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်း ခံရသည်။ တရားစွဲခံရသည်။ လေးနှစ်လောက်ကြာအောင် တရား ရင်ဆိုင် ရသည်။
ဟင်္သာတမြို့မှာ နေဖြစ်ခဲ့စဉ်တုန်းက တစ်ရက် ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥချည်းပဲသက်​သက်​ ရောင်းတဲ့
ဆိုင်ကနေ ဘဲဥ ၅ လုံး ၀ယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်လို့ ချက်မယ်ပြုတ်မယ် လုပ်တော့ ၂ လုံးက အပုပ်။ ဒါနဲ့ နောက်တစ်ရက် ဈေးထဲကို ရောက်ပြန်တော့ အဲသည့် ကြက်ဥ၊ ဘဲဥ ဆိုင်ကလေးရှေ့မှာရပ်ကာ အပြစ်တင်တဲ့ သဘောတို့၊ အစား ပြန်ရလိုချင်တဲ့ သဘောတို့ ဘာတစ်ခုမှ မပါဘဲနဲ့ ရင်းကလည်း ရင်နှီးနေတဲ့သူ ဖြစ်တာကြောင့် ဆိုင်ရှင်အပျိုကြီးကို ပြောမိပါတယ်။ ဘဲဥ ၂ လုံး ပုပ်နေပါတယ်ပေါ့။ သူကလည်း ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ကိုပဲ တုံ့ပြန်ပါတယ်။